Tags : ရွှေညာသူရွှေညာသား
By : koaungkhaing on May 17, 2010
Score: 74 Rating: 4.63 Comments: 14
မနေ့က စတီရီယိုသီချင်းတွေဆိုပြီးလို့ သည်နေ့ မြန်မာသံလေးတွေ အလှည့်မှာ အမျိုးသားနဲ့ ဘယ်လိုမှ မလိုက်တဲ့သီချင်းကို စာသားသံစဉ်ကြိုက်လွန်းလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်.. ဆရာပေါ်ဦးသက်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာလေးတွေကိုလည်း ခံစားရအောင်..
ayann kg tae. song lay par KoAK... So thwar dar lal ayann kg par tal ****************!
မြန်မာ့သံစဉ်စစ်စစ် သီချင်းလေးကိုနားဆင်ရင်းနဲ့ ဆရာပေါ်ဦးသက်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာလေးတွေကိုလည်း ခံစားခွင့်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ... ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် အကိုကြီးရေ ... ၅*
great as usual par shint ... *****
wow.. great one ... *********
taymus on May 17, 2010 0
မြန်မာသံနဲ့ အကို့အသံနဲ့ ပိုလိုက်တယ်.. အားပေးသွားတယ် bro ရေ.. အရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင်..
lwantatthu10 on May 17, 2010 0
ပင်ကိုယ် သံ ကောင်းပြီး အဆိုလည်းပိုင်နိုင်တော့ ဘာသီချင်းဆိုဆို ကောင်းမှကောင်းပါဗျာ .....********************
စူစန် အရမ်းနှစ်သက်တဲ့သီချင်းလေးပါ ပန်းချီကားလေးတေနဲ့လွှတ်ကိုလိုက်ဘက်လှကြောင်းပါချင့် အားပေးနားဆင် သွားပါတယ် :atb ဘရာဗိုဗိုဗို:))))))))))*****************************************************************************************>>>>>>>>>>>
Thichinlay nelz myanmar thanzin classical vocal realli match par tae bro....very great singing...par palzz narr sinn twer par tae bro:*:*:*:*:*:)
အရမ်းကောင်းပါတယ်..ကိုအောင်ခိုင်ကြီးအသံနဲ့လိုက်ပါတယ်....ပေါ်ဦးသက်လက်ရာတွေကိုလည်းခံစားကြည့်ရှုသွားပါတယ်... ပန်းချီကားတွေကိုဆိုရင်အရမ်းနှစ်သက်တယ်... ပြီးအောင်သေချာနားဆင်ရင်း ပန်းချီကားအစအဆုံးကြည့်သွားပါတယ်ရှင်.....
arr par pay del good par del shint bro yay 5***********************
a..than ka lae paing - thi chin ka lae kaung .. pann chi tway ga lae kaung nar htaung lite ya tar "sial" bar pae' chint
a yann ko ..narr htaung lo kg par tel...koAK yay...great one...5*4u par.
်အကိုကြီးကိုအောင်ခိုင်အလုပ်မသွားဘူးလားဗျို့~ပန်းချီကားတွေကလည်း ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ~ဆိုထားတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ~ခုအချိန်ဆိုရင်အညာမှာထန်းရည်တွေလွှတ်ပေါ နေလောက်ပြီ~းP
sumyar on May 17, 2010 0
arr pay twar par tal shint.....sone tae hti ko arr pay nar sin twar par tal naw...a yan kg tal movie lay kaw so htar tar lay yaw....